စပွန်စာဦး – Grab Love Story
အထက်တန်းကျောင်းကြီးရဲ့ တစ်စင်းထဲသော လမင်းလေး သော်တာ ဟုသတ်မှတ်ခြင်းခံထားရသည့် ကောင်မလေးရဲ့ ဘ၀မှာ ပန်းကလေးများကဲ့သို့ မလှပရှာပေ။ အမေမုဆိုးမကြီးနဲ့ ညီမငယ်တစ်ယောက် တို့နဲ့ အတူ ချို့တဲ့ဆင်းရဲစွာ နေရရှာ၏။ အမေမုဆိုးမကြီးက အကြော်ရောင်း ၊ရပ်ကွက်ထဲအ၀တ်တွေလိုက်လျော်နဲ့သမီးနှစ်ယောက် အကူအညီယူကာဘ၀ကိုရုန်းကန်နေရသည်။ ထို့ကြောင့် အကြီးဆုံးသမီးဖြစ်နေသည့် သော်တာမှာငါးတန်း ၊ ခြောက်တန်းကျောင်းသူအရွယ် ကတည်းက မိခင်မုဆိုးမကြီး နဲ့ အတူ အ၀တ်တွေ လိုက်လျှော် ၊ ရပ်ကွက်တွေပတ်ပြီးအကြော်လိုက်ရောင်းခဲ့ရသည်။ ဆင်းရဲသည့် ဒဏ်ကိုကောင်းစွာခံစားရသည့်အတွက် သော်တာမှာ အလွန်ပင် ချမ်းသာချင်သည်။ ကျောင်းခန်းထဲက ရွယ်တူကောင်မလေး တွေဝတ်သည သော်တာဝတ်ဖူးချင်သည်။့် ဂါဝန်လှလှလေးတွေမျိုး ဒီလိုဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့်ကြားကပင် သော်တာ တစ်နှစ်တစ်တန်းမှန်မှန်အောင်ခဲ့သည်။ ချို့တဲ့ မှုကြောင့် ကျောင်းကိုနောက်ကျမှတက်ခဲ့ရ သဖြင့် သူမအသက် ၁၆နှစ်တွင် ရှစ်တန်းသို့သာရောက်ခဲ့ရသည်။ သက်တူရွယ်တူတွေက ၁၀တန်း ၊ ၁၀တန်းအောင်အရွယ်ဖြစ်သော်လည်း သော်တာမှာ ၈တန်းကျောင်းသူသာဖြစ်ခဲ့သည်။ဒါပေမဲ့ သူမက ၈တန်းအကျောင်းသူအရွယ်မှာ အပျိုဖြစ်နေပြီမို့ ဖွံ့ထွား နုပျိုလှပတဲ့ အလှအပတွေပိုင်ဆိုင်လာခဲ့သည်။ ရှစ်တန်းကျောင်းသူ ပေမဲ့ သူမကအပျိုအရွယ်လေးတစ်ယောက်နှင့် မလိုက်အောင်ပင် အလုပ်များလုပ်ခဲ့ရသည်။
အထူးသဖြင့် မနက်စောစောကျောင်းမသွားခင် အကြော်ဗန်းကိုခေါင်းမှာရွက်ပြီး တစ်မြို့လုံးလှည့်ကာအကြော်ရောင်းရသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် သော်တာတစ်ယောက် မြို့အနှံ့လှည့်လည်ကာအကြော်ရောင်းရခြင်းကို ရှက်ရွံ့စပြုလာသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် မိခင်ကြီးနှင့်အတိုက်ခံပြုပြီး အကြော်ရောင်းသည့် တာဝန်ကို ညီမငယ်ဖြစ်သူထံ လွှဲအပ်လိုက်သည်။ ထို့နောက်ပိုင်းတွင် သော်တာအတော်ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ သူမအတွက်လိုအပ်မှုတွေကလည်းများပြားလာသည်။ သူများနည်းတူဝတ်စားလိုခြင်းနှင့် ပိုမိုလှပလိုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုရှစ်တန်းနှစ်မှာပင် သော်တာရည်းစားထားတတ်လာသည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်းလှပအောင် ခြယ်မှုန်းပြင်ဆင်တတ်လာသည်။ ယောက်ျားလေးတွေရှေ့မှာ ဘယ်လိုပုံစံလေးနဲ့နေပြီးသူတို့တွေကို ဘယ်လိုဆွဲဆောင်ရမလဲဆိုတာကို ချယ်ရီတတ်ကျွမ်းလာသည်။ ချယ်ရီ့အလှကိုပိုမိုတောက်ပအောင် ပံ့ပိုးပေးသည့်အရာတစ်ခုလည်းရှိသေးသည်။ ထိုအရာက ချယ်ရီ့ရဲ့ ခွေခွေလိပ်လိပ်ပုံစံလေး လို လှိုင်းတွန့်ဆံပင်ရှည်များပင်ြ့ဖစ်သည်။ ငယ်စဉ်က ဆံပင်ညှပ်လျှင်ပိုက်ဆံကုန်သောကြောင့် မိခင်ဖြစ်သူက ဆံပင်မညှပ်ခိုင်းခဲ့ပေ။ ထို့ကြောင့် ဆံပင်ရှည်ထားဖြစ်ခဲ့ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးက သော်တာ အပျိုဖြစ်လာသောအခါ သူမအတွက်အထောက်အကူ ပြုစေခြင်းဖြစ်သည်။ သော်တာ့ဆံပင်ရှည်တွေကြောင့်လည်း ယောကျာ်းလေးတွေက သော်တာ့က နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးမြန်မာဆန်ဆန်လှသည်ဟု သတ်မှတ်ထားကြသည်မဟုတ်လား။
ထို့ကြောင့် သူမက ယောက်ျားလေးတွေရှေ့တွင် မခုတ်တတ်တဲ့ကြောင်လေးလို စကားပြောတာကအစ တိုးတိုးညင်ညင်သာသာ ၊ ရယ်လိုက်လျှင်လည်း သွားမပေါ်အောင်လက်ကလေးအုပ်ကာ ရယ်တတ်သည်။ သနပ်ခါးပါးပါးလေးကိုလည်း မျက်နှာပေါ်မှာအမြဲတင်ထားခဲ့သည်။ခေတ်ပေါ်မိတ်ကပ်အလှပြင်ပစ္စည်းတွေ မသုံးနိုင်သဖြင့် သနပ်ခါးကိုသာ အလှပြင်မိတ်ကပ်ပစ္စည်းလို အသုံးပြုနေခြင်း ကလည်းသော်တာ့အတွက် မြန်မာဆန်ဆန် သနပ်ခါးလေးနဲ့ ကောင်မလေးဟူ၍ အလှကျက်သရေ တိုးစေပါသည်။ သော်တာက မိန်းကလေး သိပ်ပီသတာပဲနော်ဟု ချီးကျူးစကားဆိုလာလျှင် ကျိတ်ကာကျေနပ်နေရသည်။ ကောင်လေးတွေပေးသော ပိုးကြေးပန်းကြေးပစ္စည်းတွေက သော်တာမှာ တစ်စထက်တစ်စများပြားလို့လာခဲ့၏။ ရည်းစားကိုလည်းနှစ်ယောက်တစ်ပြိုင်တည်းထားတတ်လာသည်။ ဒါပေမဲ့သော်တာ ကအနေအထိုင်အသွားအလာပိရိသည်။ ထို့ကြောင့်ကောင်လေးတွေက မရိပ်မိပေ။ အကယ်၍ သံသယ၀င်ကာမေးမြန်းလာလျှင်လည်းဟန်ဆောင်ကောင်းသော သော်တာက မျက်ရည်လေးဝဲကာတို့ကိုဒီလိုထင်ရက်တယ်နော်။တို့မှာချစ်သူတစ်ယောက်ကိုတောင် မနည်းသတ္တိမွေးပြီး ချစ်ရတာပါ.. လိုစကားလေးတွေသုံးပြီး အသံကို ငိုသံပါလေးနဲ့ပြောရင် မေးမိတဲ့သူက သော်တာ့ ကို ပင်ပြန်တောင်းပန်သွားကြသည်ပဲဖြစ်သည်။
ထိုသို့သော မာယာ၊ ပညာတွေနဲ့ သော်တာ မှာ ၁၀တန်းရောက်လာတော့ ပညာပိုစုံလာသည်။ မာယာတွေပိုများလာတဲ့သော်တာက ကြိုက်သမျှအားလုံးလိုလို သူဌေးသားတွေချည်းပင်ဖြစ်သည်။ ပိုက်ဆံရှိသူဌေးသားတွေကို သော်တာကအပိုင်ချုပ်ထားသည်။ နောက်ပြီးသော်တာကအပေးအကျွေးလဲရက်ရောသည်။ ဒါကတော့ သူမဆယ်တန်းနှစ်ရောက်မှ ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ”အဟင့် … ရှင့်ကို ချစ်လွန်းလို့ လိုက်လျောတာနော်။ ” ”အေးပါကွာ… သော်တာကလည်းကိုယ့်ဘ၀ပါ။” ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတွေနဲ့ ပတ်သက်သည့်လူက သော်တာမှာ သုံးလေးယောက်လောက်ရှိပြီဖြစ်သည်။ သူတို့အကြိုက်လိုက်လျောပြီးသူမလိုချင်တာတွေကိုတောင်းဆိုတတ်သည့်အကျင့်လေးကလည်း သော်တာ့မှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ သူမလိုချင်သည့်အရာကိုလည်းရအောင် တောင်းဆိုပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်အထိ သော်တာတစ်ယောက်ကျွမ်းကျင်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ပိုက်ဆံရှိသူဌေးသားတွေကလည်း သော်တာ ရဲ့ အလှ၊ အညု ၊ အချွဲတွေကို စွဲလန်းမက်မောပြီး သော်တာလိုသမျှဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ကြသည်။ သော်တာရဲ့ မို့မောက်သည့် ရွှေရင်အစုံကိုနယ်ရစို့ရရုံနဲ့သူတို့မှာလူဖြစ်ရကျိုးနပ်ပြီဟုအတွေးတွေဝင်ခဲ့ကြသည်။ သော်တာကများသူတို့ရဲ့ ဒစ်ပြုတ်စလီးကိုကိုင်ပြီး ဂွင်းတိုက်ပေးလိုက်ရင်နတ်ပြည်နတ်နန်းရောက်နေရသည် ဟုထင်ကြသည်အထိသော်တာ့မာယာတွေအလှတွေမှာနစ်မျောခဲ့ကြ၏။
ဒီ့အတွက် သော်တာ့မှာအ၀တ်အစား၊ ရေမွှေး၊အလှပြင်ပစ္စည်းတွေသုံးလို့မကုန်နိုင်အောင် ပေါများလာခဲ့၏။ ဒါပေမဲ့ သော်တာက ဒီလိုပိုင်ဆိုင်မှုလေးမျိုး ၊ ဒီလိုဘ၀အခြေအနေလေးနဲ့ နည်းနည်းလေးမှပင် မတင်းတိမ်နိုင်ခဲ့။ ဒီ့ထက် ပိုပြီးပြည့်စုံ ကြွယ်ဝမှုကို မျှော်လင့်တောင့်တနေဆဲပင်။ သူမကအရမ်းကိုချမ်းသာချင်သည်လေ……………။ သော်တာ တို့ဆယ်တန်းစာမေးပွဲတွေဖြေခါနီး အချိန်လောက်၌ သော်တာ့ ရဲ့ အိပ်မက်တွေအကောင်အထည်ဖော်ဖို့လမ်းစတစ်ခုကို စတင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကားအကောင်းစားကြီးနဲ့ သူမတို့ကျောင်းရှေ့လမ်းမှ ဖြတ်သွားတတ်သည့် သူဌေးကြီးတစ်ဦးကို သော်တာအမြဲငေးမိနေကျ။ မသိမသာစုံစမ်းကြည့်တော့ မိုးကုတ်မှသူဌေးဟုသိရပြန်သည့်အခါ သော်တာတစ်ယောက်အရဲစွန့်ပြီး ထိုကားအကောင်းစားကြီးအလာတွင် ရှေ့ကဖြတ်ပြီး လမ်းကူးပစ်လိုက်တော့၏။ ”ကျွီ …….” ”အ… အမေ” ကားဘရိတ်အုပ်သံနှင့်အတူ သော်တာကလည်းလဲအကျ အံကိုက်ပင်။ ကားပေါ်မှ လူကြီးတစ်ဦးအပြေးအလွှားဆင်းလာသည်။ ”ကလေးမ…. ဘာဖြစ်သွားသေးလဲ…” ”ဟို… သမီး….” ”မင်း… ကျုပ်ကားနဲ့တိုက်မိသွားတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။” ”မဟုတ်ပါဘူး။ သမီးဘာသာလန့်ပြီးလဲသွားတာပါဦး။” အသားညိုညို ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနှင့် အသက်လေးဆယ်ကျော်အရွယ်လူကြီးကို သော်တာက ”ဦး” ဟုခေါ်ပစ်လိုက်သည်။ သော်တာက သူမခြေထောက်လေးကို ပွတ်ကာ မျက်ရည်လေးဝဲပြလိုက်ပြန်သည်။ သူမရဲ့လက်နက်တစ်မျိုးဖြစ်သည့် ဆံပင်ရှည်ကြီးများကလည်း ပခုံးပေါ်၌ကပိုကယိုဝဲကာကျနေ၏။
ကားပေါ်မှ လူကြီးက သော်တာ့ကို စူးစိုက်ကြည့်လိုက်သည်။ ကောင်မလေးက နုနုဖြူဖြူလုံးလုံးတစ်တစ်လေးနဲ့ သနားကမားရုပ်ကလေး။ ဆံပင်ရှည်တွန့်တွန့်လေးတွေနဲ့ ချစ်စရာရုပ်သွင်လေးမို့ ကားရှေ့ချော်လဲဟန်ပြပြီး အလျော်တောင်းတတ်သည့် လူမျိုးမဟုတ်ဟုကောက်ချက်ချလိုက်သည်။ ”ပြစမ်းပါအုံးကွယ်…။ မင်းခြေထောက်ဘာဖြစ်သွားသေးလဲ။” ”အို….” သော်တာ့ထဘီလေးက ဒူးအထက်နားသို့လန်တက်နေခြင်းကြောင့် ခြေသလုံးသားဖြူဖြူလေးကို တွေ့လိုက်ရသောလူကြီးက သော်တာ့ဒဏ်ရာကိုကြည့်ဖို့ မေ့ကာမှင်သက်နေ၏။ သော်တာမှထိုလူကြီး၏အကြည့်ကြောင့် မျက်နှာလေးနီကာရှက်သွားရပြီး ခေါင်းလေးကိုငုံ့ပစ်လိုက်လေသည်။ ခြေထောက်အကြောတင်သွားတာထင်တယ်… ကဲလာ… မင်းကိုဆေးခန်းလိုက်ပို့ပေးမယ်။ ထိုလူကြီးက ပြောပြောဆိုဆို သော်တာ့ကိုယ်လုံးလေးကို ပွေ့ကာကောက်ချီပြီး ကားပေါ်သို့တင်ပေးလိုက်သည်။ သူမကလည်း ကိုယ်လုံးလေးကို ထိုလူကြီး၏ရင်ခွင်ထဲသို့ အစွမ်းကုန်အပ်ထားလိုက်သည်။ သည်တော့သော်တာ့ရဲ့နူးညံ့အိစက်သော ရင်သားစိုင်လေးတွေက ထိုလူကြီး၏ရင်ခွင်ကျယ်ကြီးနှင့် ပွတ်ထိမိနေခြင်းက ထိုလူကြီးရင်ကိုလှိုက်မောစေသည်ပေါ့။ ဦးလှမြိုင်ဟုခေါ်သည့် ထိုလူကြီးနှင့် သော်တာတို့ရင်းနှီးသွားကြသည်။ ဦးလှမြိုင်က နောက်တစ်နေ့ ညနေတွင်သော်တာ့ကိုလာခေါ်ပြီးဆေးခန်းလိုက်ပြပေးပြန်၏
ဆေးခန်းကပြန်ထွက်တော့လည်း စားစရာတွေတစ်ပုံတစ်ပင် ၀ယ်ပေးလိုက်ပြန်သည်။ သော်တာ့ ဘ၀မှာမစီးဖူးသောကားကိုစီးရခြင်း၊ မစားဖူးသောအစားအစာတွေကိုစားသောက်ရနဲ့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးကျေနပ်နေလေ၏။ ဒါပေမဲ့ သော်တာတို့က ဣနြေ္ဒ မပျက်အောင်နေသည်။ သူမရဲ့စွန့်စားမှုတွေက အရာထင်စပြုလာပြီမဟုတ်လား။ ဦးလှမြိုင်ကားရှေ့ချော်လဲလိုက်ခြင်းက သော်တာ့ရဲ့ စွန့်စားမှုအစပင်ဖြစ်သည်။ သူမက ထိုအခြေအနေမှနေ၍ သူမဘ၀အတွက် အများကြီးမျှော်မှန်းထားသည်ပင်ဖြစ်၏။ တတိယမြောက်တွေ့ဆုံမှုညနေခင်း၌ ထုံးစံအတိုင်းဦးလှမြိုင်ပေါက်ချလာပြန်၏။ သော်တာကို ဆေးခန်းလိုက်ပြပေးရန်ဖြစ်သည်။ အမှန်မှာသော်တာ့ခြေထောက်ကကောင်းနေပေပြီ။ ဘာဆိုဘာမှမဖြစ်တော့ ၊ ဒါပေမဲ့ ဟန်ဆောင်ကောင်းသောသော်တာက ဒီနေ့မှပိုနာလာသည်ဟုအကြောင်းပြပြီး လမ်းမလျှောက်နိုင်ဟုဆိုသည်။ အဲဒီမှာ သော်တာ့ကိုယ်လုံးလေးကို သိပ်ပြီး ချီချင်၊ ပွေ့ချင် ၊ ထွေးပိုက်ချင်နေတဲ့ ဦးလှမြိုင်ကလည်း အဆင်သင့်ပင်ဖြစ်ကာ အကြိုက်တွေ့ပေပြီပေါ့။ ”အို… ဦး” စွေ့ကနဲပွေ့ချီလိုက်သောကြောင့် ဦးလှမြိုင်ရင်ခွင်ထဲသို့ သော်တာ့ကိုယ်လုံးလေးက အလိုက်သင့်။ အိမ်မှာအကြော်ထွက်ရောင်းနေသည့် အမေနှင့် ညီမတို့မရှိ၍ သော်တာ့မာယာတွေက ပွင့်လင်းလှသည်။ ဦးလှမြိုင်၏ ရင်ဘတ်ကြီးကို သော်တာ့ နို့အုံလုံးလုံးကျစ်ကျစ်လေးနဲ့ အတင်းဖိကပ်ပြီး ဦးလှမြိုင်ခါးကို ကြောက်လန့်တကြားပုံစံလေးနဲ့ ခပ်တင်းတင်းလေးဖက်ပစ်လိုက်လေသည်။ သက်ကြားအိုကြီး ဦးလှမြိုင်မှာ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင် အပျိုပေါက်မလေးရဲ့ အတွေ့မှာ မိန်းမူးသွားရတော့သည်။
ထို့နောက်………..။ ထိုနေ့က သော်တာဆေးခန်းသို့မရောက်ဖြစ်ခဲ့။ ဦးလှမြိုင်တည်းခိုသော အိမ်လေးသို့ ဦးလှမြိုင်နဲ့အတူ သော်တာရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဦးလှမြိုင်ရဲ့ စူးစူးရဲရဲအကြည့်တွေနဲ့ သော်တာရဲ့ မျက်လုံးတောက်တောက်လေးတွေက အကြည့်ချင်းဆုံကာ အဓိပ္ပာယ်တစ်ရပ်ကို ဖွင့်ဆိုဖြစ်ခဲ့ကြလေတော့၏။ ဦးလှမြိုင်က မုဆိုးဖို၊ ကာမမှုမှာ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်ခဲ့သူ။ သော်တာကလည်း ခြေစမ်းပွဲတွေအများကြီးကန်ဖူးတဲ့ အသင်းတစ်သင်းလို တက်ကြွနိုးကြာနေတဲ့ ရမ္မက်စိတ်တွေနဲ့ အားကျမခံပေ။ ငါးကြော်ကြွပ်ကြွပ်ရွရွလေး နဲ့ အစာပြတ်ငတ်နေသည့်ကြောင်ကြီး။ အတွဲအဖက်ညီစွာဖြင့် ကာမတောသို့ ခရီးထွက်ခဲ့ မိကြလေတော့သည်။ ”အင်း… ဟင်း… ဦးရယ်” ”ကလေးရယ် .. အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲကွယ်။” ဦးလှမြိုင်က သူ့ရင်ခွင်ထဲတွင် နုံးခွေဟန်လေးဖြင့် တိုးဝှေ့ဝင်နေတဲ့ သော်တာ့ကိုယ်လုံးလေးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဖက်ပြီး သော်တာ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ဖျစ်ညှစ်ကစားလို့နေသည်။တစ်ချက်တစ်ချက် နို့သီးခေါင်းလေးကို မချင့်မရဲဖြင့် ညှစ်လိုက်မှုကြောင့် သော်တာမှာ တွန့်ခနဲဖြစ်ဖြစ်သွားပြီး ဦးလှမြိုင်ကို ညုချွဲလေး ချွဲပြလိုက်သည်။ ဦးလှမြိုင်ကလည်း သော်တာ့ကိုယ်လုံးလေးကို မလွတ်တမ်းဖက်ထားရင်း နက်မှောင်ရှည်လျားသည့် သော်တာ့ဆံပင်လေးတွေကိုနမ်းရင်း ချစ်မ၀နိုင်ပတ်ပျိုးကို ဖွဲ့ပြနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ”ကလေး… အရမ်းမောနေပြီလားဟင်” ”ရပါတယ်ဦးရယ်… ဦးရဲ့ ကြင်နာယုယမှုတွေက သော်တာ့ရဲ့ ဘ၀အမောတွေလောက်တော့မမောပါဘူး။
သော်တာက ဦးလှမြိုင် သူမရဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို ပိုပြီးဂရုပြုမိစေရန်သနားအောင်ပြောလိုက်သည်။ ဦးလှမြိုင်မှာတော့ နုဖတ်ဖွေးဥချောမောလှပနေသည့် ရုပ်ရည်လေးနဲ့ မလိုက်ဖက်သည့် သော်တာ့ဘ၀ခရီးကြမ်းကို သိမြင်ပြီးဖြစ်ရာ သနားစိတ်ဖြင့် အကြင်နာတွေပိုတိုးလာပြီဖြစ်၏။ သော်တာ၏ မာယာတောမှာ မျောနေရခြင်းပင်ဖြစ်ပေတော့၏။ ”ဦး ကလေးကို ချစ်ချင်သေးတယ်ကွယ်..” ”ဦး သဘောပါပဲ ဦးရယ်” အပေးအကျွေးရက်ရောသော သော်တာက နောက်တစ်ကြိမ်လိုးဖို့တောင်းဆိုလာသည့် ဦးလှမြိုင်ကို မငြင်း။ ပြီးတော့ သော်တာက အလိုးမခံဖူးသည့် အပျိုစင်လေးလည်းမဟုတ်၊ (၁၀)တန်းကျောင်းသူ ဘဝရောက်သည်မှစ၍အပျိုရည်ပျက်ခဲ့ရပြီးပြီဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့ သူမထားခဲ့သည့် ရည်းစားတွေရဲ့လီးနဲ့ ဦးလှမြိုင်လီးတန်ကြီးကို နှိုင်းယှဉ်ခံစားအလိုးခံကြည့်မှပင် ကာမအရသာဆိုတာကိုသေချာခံစားမိခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ဦးလှမြိုင်ကို ကာမဆက်ဆံသည့် တဒင်္ဂစွဲလမ်းမိစိတ်ဖြင့် ဦးလှမြိုင်လိုကျ လိုက်လျောနေမိခြင်းပင်ဖြစ်၏။ ”ဦးကို ကလေးက ဖင်ကုန်းပေးပါလား… ဦးနောက်ကနေ လိုးပေးချင်လို့” ”အို.. ဦးကလည်း” ဒီတစ်ခါတော့ သော်တာရှက်သွားရသည်။ ယခင်သူမ ရည်းစားများနဲ့ ဆုံတွေ့ဆက်ဆံခဲ့စဉ်က သမရိုးကျဆက်ဆံခြင်းဖြင့်သာ အလိုးခံခဲ့ဖူးသည်။ ဒါ့အပြင် သူမစောက်ဖုတ်ထဲ လီးဝင်အလိုးခံပြီး ဆန္ဒတွေပြည့်ဝသွားကြပြီဆိုလျှင် နောက်တစ်ကြိမ်ဆိုတာကို သော်တာခွင့်မပြုတော့။ တစ်ခါဆုံတွေ့လျှင် တစ်ကြိမ်သာအလိုးခံခဲ့သူ။ အတင်းဂျစ်တိုက်နေလျှင် ဂွင်းထုပေးခြင်းဖြင့်သာဖြေသိမ့်ပေးခဲ့သူ။ ခုတော့ ဦးလှမြိုင်နဲ့ ကျမှ သော်တာပေးဆပ်ရတာများနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဦးလှမြိုင်က ဂိုင်းကြီးကြီးနဲ့ ဆိုတော့ သော်တာ့ဘက်ကလည်း အရင်းအနှီးကြီးနေရခြင်းဖြစ်ပေသည်။
”လုပ်ပါ ကလေးရယ်… ဦးက ကလေးက ဖင်ကုန်းပေးထားရင် ကလေးရဲ့ စောက်ဖုတ်က နောက်ကိုပြူးထွက်နေမှာ…. ဦးက ဒီလီးကြီးနဲ့ ကလေးစောက်ဖုတ် ဖောင်းဖောင်းဖွေးဖွေးကြီးကို နောက်ကနေလိုးဆောင့်ပေးမှာ…. ကလေးရယ်…. ဖင်လေးကုန်းလိုက်နော်…” ဦးလှမြိုင်က သော်တာ့ကို သင်ပြသွေးဆောင်ခြင်းများဖြင့် ရမ္မက်ဆန္ဒတွေတက်ကြွလာအောင် စကားလုံးတွေ ခပ်ကြမ်းကြမ်းသုံးကာ ရမ္မက်စိတ်ကို ဆွပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါမှသော်တာ စိတ်တွေပြန်ထလာပြီး သူ့အလိုကို လိုက်လျောစေဖို့ဖြစ်၏။ ထို့အပြင် ပြန်လည်ထောင်မတ်နေပြီဖြစ်သော သူ၏လီးတန်ညိုညိုတုတ်တုတ်ကြီးကိုလည်း သော်တာ့ လက်ကလေးဖြင့် ကိုင်စေလိုက်သည်။ ဦးလှမြိုင်ရဲ့ စကားတွေက သော်တာ့ကို အမှန်ပင်ရမက်သွေးတွေကြွစေရသည်။ ဒါ့အပြင် သူမလက်ထဲမှလီးတန်ကြီးကြောင့်လည်း သူမစိတ်ထဲ ဖင်ကုန်းအလိုးခံချင်သောစိတ်များ အလိုအလျောက်ဖြစ်ပေါ်နေရပြီဖြစ်သည်။ ဦးလှမြိုင်လီးတန်ကြီးက သူမလက်ကလေးနှင့် တစ်ကိုင်ပင်မပြည့်ပေ။ ထိုလီးတန်ကြီးဆီမှ တဒုတ်ဒုတ်ဖြင့် သွေးခုန်နေသလို အထိအတွေ့က သူမလက်ကလေးမှတစ်ဆင့် အသွေးအသားတွေ တစ်ကိုယ်လုံးကို ရမက်သွေးအရှိန်လွှမ်းခြုံနေသလိုခံစားလာရသည်။ စောက်ဖုတ်ထဲမှလည်း စစ်ကနဲ စစ်ကနဲဖြစ်ကာ အရည်တွေ ထပ်မံစိမ့်ထွက်လာရပြန်သည်။ ”ကဲ…. ထ… ကလေးလေး။ အင်း… ဟုတ်ပြီ။ ခါးကိုခွက်ထား။ ဖင်ကိုနောက်ကို ကော့ပစ်ထားလိုက်….။ ဟုတ်ပြီ…။ လက်တွေကို တောင့်ခံမထားနဲ့…။ တံတောင်နဲ့ပဲထောက်ထား..။ နဲနဲထပ်ပြီးကုန်းလိုက်ဦး…။ ဟုတ်ပြီ…။
အဲဒီအတိုင်းကလေးကို ဦးလိုးပေးမယ်နော်..။” သော်တာတစ်ယောက်ဦးလှမြိုင်ခိုင်းစေနေရာချထားပေးသည့်အတိုင်း ဖင်ကုန်းပေးလိုက်ရတော့သည်။ ဦးလှမြိုင်က သော်တာ့ဖင်ကြီးတွေနောက်မှာ နေရာဝင်ယူလိုက်ပြီး သူ့လီးတန်ညိုတုတ်တုတ်ကြီးကို လက်ဖြင့်ထိန်းကိုင်ကာ သော်တာ့ အဖုတ်လေးရဲ့ အ၀မှာတေ့ပြီးထောက်လိုက်သည်။ အဖုတ်ဝကို ထိပ်နဲ့တေ့ထောက်ခြင်းခံလိုက်ရသည်နှင့် သော်တာ့ ဖင်ဆုံကြီးက တွန့်ကနဲတုန်သွားသည်။ နောက်မှအသက်ကို၀၀ရှုကာ ဖင်ကိုတောင့်ခံပြီး လီးအ၀င်ကို ငဲ့လင့်နေလိုက်တော့သည်။ ဒစ်ထိပ်ဖြင့် တေ့ထောက်ခြင်းခံထားသော သော်တာ့အဖုတ်နီနီလေးက နုအိပြီးဝင်းလက်နေသည်။ အမွှေးလေးတွေက နုနုလေးပင်ရှိသေးပြီး အစိလေးအထက်ဆီးစပ်နားမှာ အခွေလေးတွေဖြစ်လို့နေသည်။ ဦးလှမြိုင်က သော်တာ့အဖုတ်လေးကို သူရဲ့ကျန်လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဆီးစပ်အထက်နားမှ လက်လျှိုနှိုက်စမ်းပြီး အစေ့လေးကို အသာပင်ပွတ်ချေပေးလိုက်သည်။ ”အင့်… ဟင့်.. ဦးရယ်… လုပ်မှာဖြင့်လုပ်ပါတော့။ သော်တာမနေတတ်တော့ဘူး။” အဖုတ်ထဲ လီးဝင်လာဖို့ စောင့်မျှော်ငဲ့လင့်နေတဲ့ သော်တာခမျာ အစိကိုပွတ်ချေခြင်းခံလိုက်ရသဖြင့် ဖင်ကြီးခါယမ်းသွားပြီး သူမဖင်ကြီးကို အနောက်ဖက်သို့ ကော့ကော့ဆောင့်ကာ အနေအထိုင်ခက်လို့နေရတော့သည်။
ဦးလှမြိုင်ကလည်း အစိကိုပွတ်ချေနေလျက်မှပင် သူရဲ့ အတန်ကြီးကို သော်တာ့အဖုတ်လေးထဲသို့ ဖိနှစ်ဆောင့်သွင်းလိုက်လေတော့၏။ ”ဘွတ်.. ဖွတ်…. ဖွတ်… ပြစ်…. ဒုတ် ….” ပထမတစ်ချီလုပ်ပြီးသား အဖုတ်ထဲသို့ ဦးလှမြိုင်အတန်ကြီးက လေအန်သံနဲ့အတူ ထိုးခွဲဝင်ရောက်သွားပြန်သည်။ သော်တာကတော့ မသက်မသာပင် ခံစားလိုက်ရရှာသည်။ ” အ … အီး… အမေ့… နာလိုက်တာ… ဦးရယ်” ခါးလေးခွက် ဖင်ကုန်းပေးထားသော သော်တာတစ်ယောက် အဖုတ်ထဲသို့ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြီး ၀င်လာတဲ့ အတန်ကြီးကြောင့် ခါးလေးခုံးထသွားရသည်။ ဒါပေမဲ့ လီးအ၀င်က ထိထိမိမိရှိလှတာကြောင့် ချက်ချင်းပင် အရသာတွေ့သွားရတော့၏။ လီးကြီးက အဖုတ်သေးသေးလေးထဲ နင့်နင့်နဲနဲပြည့်ပြည့်ကြပ်ကာ ၀င်နေခြင်းကြောင့် အ၀င်အထွက်ချောမွေ့စေရန် လက်ကိုနောက်သို့ပြန်ပြီး သူမဖင်သားကြီးကို သူမဘာသာလှမ်းဆွဲပြီးဖြဲပေးမိကာ အလိုးခံနေတော့၏။ သော်တာ့ပုံစံလေးမှာ အလိုးခံမှုကို မက်မက်မောမောခံစားရင်း ကာမအရသာထူးကို ခံစားလို့နေပေ၏။ ဦးလှမြိုင်မှာ အသားဖြူဖြူ ၊ ဖင်အိုးကောင်းကောင်းနဲ့ ငယ်ငယ်ချောချောကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုဖင်ကုန်းခိုင်းပြီး လိုးဆော်နေရခြင်းကြောင့် သူ၏အသွေးအသားတို့က ပူနွေးတက်ကြွလို့နေသည်။
ဒါ့အပြင် ဆောင့်ဆောင့်လိုးလိုက်တိုင်း ရှေ့တိုးနောက်ငင် ခါခါဆင်းသွားသော ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူေ၀၀ိုက်ာကျနေသော သော်တာ့ဆံပင်ရှည်များကြောင့် သော်တာအလိုးခံနေသည့် ပုံစံလေးက ဦးလှမြိုင်အတွက် ကာမအမြင်ဖီလင်ကိုခံစားလို့ နေရပြန်သေး၏။ အား…. ကောင်းလိုက်တာ ဦးရယ်..။ အစပထမ၌ အလိုးခံနေရသော သော်တာ့ရဲ့ပုံစံလေးက ရမက်သွေးကြွစရာဖြစ်နေသော်လည်း နောက်ပိုင်း၌ သော်တာကိုယ်တိုင်ကပင် အလိုးခံရင်း ဦးလှမြိုင် စိတ်တွေပိုထန်အောင် အောက်မှ အညု ၊ အခရာလေးများပြောပေးခြင်း၊ ဦးလှမြိုင်ရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေကို တိုးပွားအောင် အားပေးအားမြှောက်ပြုပေးသည့် စကားသံလေးများကို ပြောတတ်ဆိုတတ်လာလေတော့၏။ ”အား… ကောင်းတယ် ဦးရယ်… ဆောင့်.. နာနာလေးဆောင့်ပါ..။” သော်တာ့ရဲ့ အညုအချွဲတွေကြောင့် ရမက်ထန်လာပြီဖြစ်သော ဦးလှမြိုင်မှာ သော်တာ့ကို နင်းကန်ပြီး ဆောင့်လိုးနေလေတော့သည်။ ဦးလှမြိုင်တစ်ကိုယ်လုံး ချွေးများဖြင့် ရွှဲနစ်နေသလို သော်တာ၏ဖြူဖြူဖွေးဖွေး အသားလေးတွေမှာလည်း ချွေးစက်ကလေးများသီးနေသည်။ ဖြူဖွေးသော ကိုယ်လုံးကလေးမှာ တောက်ပြောင်ပြီးကြွေရုပ်ကလေးလိုဖြစ်နေသည်။ သော်တာမှာ သူမဖင်သားကြီးကို နောက်သို့ပစ်ပစ်ဆောင့်ကာ အလိုးခံပေးနေရ၏။
သူမရဲ့ ပစ်ဆောင့်ကော့တင်အလိုးခံမှုနဲ့ ဦးလှမြိုင်ရဲ့ဆောင့်ချက်တွေကြောင့် သော်တာ့ဆံပင်ရှည်လေးတွေမှာလည်းေ၀၀ဲခါယမ်းလို့နေသည်။ သော်တာတစ်ယောက် ဖင်ကုန်းပြီးအလိုးခံနေရတာအရမ်းကို အရသာတွေ့နေပြီး အဖုတ်ထဲမှာ ပူထူကျင်ဆိမ့်ကာ ပြီးချင်လာတော့၏။ ထို့ကြောင့် ဦးလှမြိုင်လီးကြီးကို သူမအဖုတ်အတွင်းသားနုနုလေးများဖြင့် ရှိသမျှအင်အားလေးသုံးကာ ဆွဲဆွဲညှစ်ပေးနေမိသည်။ ဦးလှမြိုင်မှာတော့ သော်တာ့ရဲ့ အပေးကောင်းမှု၊ အဖုတ်လေးထဲမှ တရစ်ရစ်ဆွဲညှစ်မှုများကြောင့် လိင်တန်ကြီးတစ်ခုလုံး ပူထူကျင်ဆိမ့်ကာ သုက်ရည်တို့က သုက်ကြောတစ်လျှောက် တင်းရင်းကာနေတော့သည်။ ဦးလှမြိုင်လိုးအားကို မြှင့်တင်ပြီး ဆောင့်ရင်း သော်တာ့ကို ပက်ပင်စက်စက်မညှာမတာပင် ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆောင့်လိုးပစ်လိုက်တော့သည်။ ”အား…. ထွက်ကုန်ပြီ ဦးရေ….။” ဦးလှမြိုင် သော်တာ့ကို နင်းကန်ဆောင့်လိုး၍ သုက်ရည်တွေထွက်သွားချိန်နှင့် အံကိုက်ပင် သော်တာ့အဖုတ်ထဲမှ အရည်များလည်းထွက်ကာ အပြီးချင်းဆုံစည်းသွားတော့သည်။ ဦးလှမြိုင်တစ်ယောက် သော်တာ့ကို အစွဲကြီးစွဲမက်လို့သွားရပြီဖြစ်သည်။ ”ဦးတော့ သော်တာ့ကို အရမ်းချစ်မိသွားပြီကွာ..။” ”တကယ်ပဲလားဦးရယ်။ သော်တာကသာ ဦးကို အားကိုးချစ်စိတ်တွေနဲ့ ချစ်မိလို့ အခုလိုတွေဖြစ်ခဲ့ရတာ၊ ဦးမှာသာ အိမ်ထောင်တွေဘာတွေရှိ…..။” သော်တာက မျက်ရည်လေးဝဲကာ ငဲ့ကာဖြင့် ဦးလှမြိုင်ကို မာယာထောင်ချောက်နဲ့ အပိုင်ချုပ်သည်။
ဦးလှမြိုင်မှာ သော်တာ၏သနားစဖွယ် ဟန်ပန်လေးကြောင့် ပျာပျာသလဲဖြစ်ကာ သော်တာ့ရဲ့ နဖူးလေးကို ခပ်ဖွဖွနမ်းလိုက်ရင်း … ”ဦးမှာ အိမ်ထောင်မရှိတော့ပါဘူး သော်တာလေးရယ်။ ဦးက မုဆိုးဖိုပါ။ ဦး သော်တာလေးကို လက်ထပ်ယူမှာပါကွာ….။” ဦးလှမြိုင်ထက် အသက်ထက်ဝက်ကျော်ငယ်ပေမဲ့ သော်တာက ယောက်ျားတွေကို ကစားလှည့်စား မာယာများတဲ့ အတတ်ပညာတွင် အတွေ့အကြုံမနည်းတော့။ ထို့ကြောင့် ဦးလှမြိုင်လို သူဌေးတစ်ယောက်ကို အပီချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဦးလှမြိုင်က သော်တာ့မိဘတွေဆီမှာ လိုက်တောင်းပါ့မယ်ဆိုတာတောင် မိခင်ဖြစ်သူကန့်ကွက်မှာစိုးရိမ်တဲ့ သော်တာကသူမသဘောဆန္ဒနဲ့ သူမ ဦးလှမြိုင်နောက်လိုက်ခဲ့မည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ အိမ်ကိုတော့ ချစ်သူနောက်ခိုးရာလိုက်ပြေးသွားပြီဟု စာရေးထားခဲ့ကာ ဦးလှမြိုင်ဆီမှ ပိုက်ဆံငါးသိန်းယူပြီး ပေးထားခဲ့သည်။ သော်တာက ဆင်းရဲတွင်းမှ လွတ်မြောက်ရပြီဟု ယုံကြည်စိတ်ဖြင့် မိသာစုကို လျစ်လျူရှုကာ ခွဲထားနိုင်ခဲ့သည်။ မိသားစုရှေ့ရေးတွေဘာတွေ သူမ မသိတော့။ ဦးလှမြိုင်နောက်သို့ လိုက်သွားလျှင် သူမဘ၀ လုံခြုံမှုအပြည့်ရှိမည်ဆိုသည့် အတွေးသာ သူမတွေးနေခဲ့သည်။ ဦးလှမြိုင်နှင့်အတူ မိုးကုတ်သို့ သော်တာလိုက်ပါလာခဲ့သည်။ ဦးလှမြိုင်၏အဆောင်အယောင်တွေက သူမတစ်သက် အိပ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ဖူးသည့် အရာတွေဖြစ်နေ၏။
တိုက် ၊ ကား၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးက သော်တာ့ကို မက်မောတပ်မက်စိတ်ဖြစ်စေရသည်။ မိုးကုတ်ကို ရောက်ကတည်းက သော်တာတစ်ယောက် တိုက်ပေါ်က မြေပေါ်မဆင်းတော့။ ဦးလှမြိုင်ဆင်သည့် အ၀တ်အစား၊ လက်ဝတ်ရတနာမျိုးစုံတို့ဖြင့် အိပ်မက်ကမ္ဘာလေးထဲရောက်ရှိနေရသလို ပျော်ရွှင်မြူးတူးနေတော့လေသည်။ ဦးလှမြိုင်ကလည်း သော်တာ့လို မယားငယ်ငယ်ချောချောလှလှ ဆယ်ကျော်သက်လေးကို ရထားသည်မို့ သော်တာဘာပဲလုပ်လုပ် တပြုံးပြုံးနဲ့ပင်။ အချိန်မှန်မှန် ကာမဆက်ဆံနေရလျှင်ကျေနပ်နေသည်။ သော်တာကလည်း အိစက်ညက်ညောသော ဖဲမွေ့ယာကြီးပေါ်မှာ ဦးလှမြိုင်ကို ရမက်ဆေးတွေတိုက်ကျွေးပြီး လောကကြီးကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့မေ့လို့နေတော့သည်။ တစ်လလောက်ကြာတော့ ဦးလှမြိုင်က သော်တာ့ကို အရေးဆိုလာသည်။ ”သော်တာလေး.. ဦးတို့ လက်ထပ်ကြမယ်လေ” ”ဟင်..” ထိုအခါမှ သော်တာမှ လက်ရှိဘ၀ကို သတိရမိသည်။ တကယ်တော့ ဦးလှမြိုင်ကိုသော်တာမချစ်။ ထို့ကြောင့် တစ်ဘ၀လုံးစာအတွက် လက်မထပ်ချင်။ သူမချစ်တာ ဦးလှမြိုင်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆောင်အယောင်တွေပင်။ သူမ ဦးလှမြိုင်နောက်လိုက်ခဲ့ခြင်းကလည်း ချမ်းသာချင်၍သာဖြစ်သည်။ ဦးလှမြိုင်ကိုချစ်၍ လက်ထပ်ပေါင်းသင်းရန်လိုက်ပါခဲ့ခြင်း မဟုတ်ခဲ့။ ”ဘယ်လိုလဲ သော်တာ.. ၀မ်းမသာဘူးလား။” ”ဟုတ်… ဟုတ်ကဲ့ … ၀မ်းသာပါတယ် ဦးရယ်၊ ဒါပေမဲ့ လက်ထပ်ဖို့ ကိစ္စကို အလျင်မလိုပါနဲ့အုံးလား။” ”ဘာဖြစ်လို့လဲ သော်တာလေးရဲ့။
ဟိုလေ.. သော်တာ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲဖြေချင်သေးတယ်။” ”ဟင်.. ဘယ်လို..။” သူနဲ့ လက်ထပ်ဖို့ လိုက်လာခဲ့ပြီးမှ စာမေးပွဲဖြေမည်ဆိုတာကို ဦးလှမြိုင်သဘောမပေါက်။ ဘ၀င်မကျ။ ဒါပေမဲ့ သော်တာက ဦးလှမြိုင်ကိုယ်လုံးကြီးကိုဆွဲဖက်ပြီး ဆယ်တန်းအောင်ချင်တဲ့အကြောင်း၊ တက္ကသိုလ်တက်ချင်တဲ့အကြောင်းတွေ ချွဲ့နွဲ့ပြီး ပြောပြလိုက်တော့ ဦးလှမြိုင်တစ်ယောက်ခေါင်းညိမ့်လိုက်ရတော့သည်။ ”ဒါဆို ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘယ်လိုပြောထားမလဲ သော်တာလေးရဲ့။” ”ဦးကလဲ ဦးတူမလို့ ပြောပြထားလိုက်ပေါ့လို့။” သော်တာက ဦးလှမြိုင်ရဲ့ပါးကိုရွှတ်ခနဲ နမ်းလိုက်ပြန်သည်။ဒီလိုအပြုအမူတွေနဲ့အတူ ဦးလှမြိုင်လီးတန်ကြီးပျော့ကျခဲ့ရပြန်သည်။ နောက်ဆုံးတော့ သော်တာ့အလိုကျ ဦးလှမြိုင် လိုက်လျောခဲ့ရတော့သည်။ ဆယ်တန်းအောင်စာရင်းထွက်ပြန်တော့ ဦးလှမြိုင်က တစ်စခန်းထကာ လက်ထပ်ဖို့ပြောတာပြန်၏။ ”အို… ဦးကလဲ သော်တာဖြင့် စာမေးပွဲအောင်လို့ ပျော်ပြီး ဦးရင်ခွင်ထဲမှာနေနလို့မဝသေးပါဘူး။ လက်ထပ်ဖို့နေပါအုံးနော် ဦး…၊ နော်လို့…။” သေ်ာတာအစွမ်းကုန် ကပ်ချွဲပေမဲ့ ဒီတစ်ခါတော့ ဦးလှမြိုင်ဘက်က တင်းခံထားခဲ့သည်။ သူနဲ့လိုက်ပါပြီး တစ်နှစ်အတွင်း အစားအသောက်ကောင်းကောင်း ၊ အနေအထိုင်ကောင်းကောင်းတွေနဲ့ တစ်သွေးတစ်မွေးလှလာသော သော်တာ့ကို လက်လွှတ်သွားမှာ စိုးရိမ်မိသည်။ သော်တာတစ်ယောက်အရမ်းကိုလှလာပြီး ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားတွေကလည်း မက်မောစရာအတိဖြစ်နေပြီဆိုတော့ ဦးလှမြိုင်ဘက်က သော်တာ့ကို လက်လွတ်သွားမှာ စိုးရိမ်နေမိသည်မှာ အလွန်တော့မဟုတ်ပါ။
ဒီတော့ ဦးလှမြိုင်ရသလောက်တော့ တင်းခံထားမိသည်။ နောက်ဆုံးတော့ တက္ကသိုလ်အရမ်းတက်ချင်နေသည့် သော်တာမှာ ဦးလှမြိုင်နှင့် လက်ထပ်ခဲ့ရတော့သည်။ ဒါပေမဲ့ သော်တာက မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲတွေဘာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ တက္ကသိုလ်တက်နေစဉ်တွင် သူမကို ဦးလှမြိုင်၏ တူမအဖြစ်သာ လူသိခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အကြောင်းပြချက်က အိမ်ထောင်သည်ဘ၀နဲ့ တက္ကသိုလ်တက်ရမှာ ရှက်လို့ဟူ၍ဖြစ်သည်။ တူမအရွယ်မယားချောလေးကို အပိုင်ရနေပြီမို့ ဦးလှမြိုင်ကသော်တာ့ ဆန္ဒကို အလျော့ပေးခွင့်ပြုခဲ့သည်။ထိုခွင့်ပြုချက်ရတော့ သော်တာက သူမအသွေးအသားတွေနဲ့ ဦးလှမြိုင်ကို အချစ်ကြီးချစ်ပြလိုက်ပြန်သည်။ မာယာတွေနဲ့ အထပ်ထပ်ရစ်ပတ်ပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်တက်ရမည့်ရက်နီးလာတော့ သော်တာအပျော်ကြီးပျော်နေသည်။ မိုးကုတ်ကနေ မန္တ္တလေးထိသွားပြီးကျောင်းတက်ရမှာမို့ သော်တာကလွတ်လပ်ပြီဟု စိတ်တွင်တွေးကာပျော်ရွှင်နေသည်။ ”သော်တာနေဖို့ မြို့ထဲမှာ ဦးတိုက်ခန်းရှိတယ်။ အဲဒီတိုက်ခန်းမှာပဲနေပြီးကျောင်းတက်လေ။ ဦးလဲမကြာမကြာလာပြီး သော်တာလေးနဲ့ ချစ်လို့ရတာပေါ့။” ”ဟင့်အင်း .. ဟင့်အင်း.. ဦးကလဲ … သော်တာက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘ၀ကို ပီပီပြင်ပြင်ခံစားချင်သေးတာ… အဆောင်ကပဲတက်မယ်ဦး…။” ”ဟင်… ဒါဆို ဦးလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။” ”သြော်.. ဦးကလည်း အဲဒီတော့ ဦးတိုက်ခန်းမှာ သော်တာလိုက်နေမှာပေါ့လို့။” ”ကဲ သော်တာ့ သဘောပါပဲကွာ။” ”ဟေး.. အဲဒါကြောင့်……” ”ဘာလဲ။ အဲဒါကြောင့် ဦးကိုချစ်တာလို့ ပြောဦးမယ်မဟုတ်လား။” ”ဟွန်း.. ဦးနော်..။
သော်တာ့ကို ရှက်အောင်လုပ်တယ်။ ကဲ… ကဲ….” သော်တာ ဦးလှမြိုင်ရင်ဘတ်ကြီးကို လက်သီးဆုတ်ကလေးဖြင့် မနာအောင်ထုလိုက်သည်။ ဦးလှမြိုင်ကလည်း သော်တာ့လက်ကလေးကိုဖမ်းဆွဲကာ သော်တာနဲ့အတူ ကုတင်ပေါ်သို့ လှဲချပစ်လိုက်တော့၏။ ”အင်း… ဟင်း… ဦးရယ်…” အပြုအစု အချွဲ့အနွဲ့ကောင်းသော သော်တာ့ကို ဦးလှမြိုင်တစ်ယောက် အသည်းစွဲချစ်နေခြင်းက လွန်သည်ဟုမပြောနိုင်ပေ။ သော်တာက မာယာဆိုတဲ့အဆိပ်တွေပြင်းလှသည်ကိုး………..။ ”ဟေ့ကောင်… ငါပြောတာ အဲဒီ့ကောင်မလေးပေါ့။ မိုးကုတ်ကသူဌေးတူမတဲ့ ၊ ၀တ်တာစားတာ၊ သုံးတာစွဲတာတော့ အလျှံပဲ….။” တက္ကသိုလ်က ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ သော်တာတစ်ယောက်နာမည်အတော်လေးကြီးလာခဲ့သည်။ သော်တာ့ကို မိန်းကလေးတိုင်းကအထင်ကြီးအားကျကြသည်။ သော်တာ့ဘ၀က အစစအရာရာပြည့်စုံကာ မိုးပေါ်ကလမင်းလိုစံမြန်းနေရသည်ပဲ။ အဲဒါပဲတင်လားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါ။ သော်တာရဲ့ နက်မှောင်သန်စွမ်းသောဆံပင်ရှည်ကြီးတွေက တင်ပါးထွားထွားအိအိနားထိရောက်သည်။ လုံးကျစ်မို့မောက်သော ရွှေရင်အစုံကို ပေါ်လွင်အောင် ခါးတိုအင်္ကျီလေးတွေဝတ်ပြီး ထဘီကိုတင်းနေအောင် ချပ်ချပ်ရပ်ရပ် ၀တ်တတ်သည့်သော်တာ့အလှကို မြန်မာဆန်ဆန်လှသည်ဟုဆိုကာ ကွင်းဘွဲ့ပင်အပ်နှင်းခဲ့ကြသည်။ မေဂျာကွင်းတွေထက်ပိုလှသည်ဟု ပင်သတ်မှတ်ကြပြီး တက္ကသိုလ်တစ်ခုလုံးရဲ့ အလှဘုရင်မဘွဲ့ကို အပ်နှင်းကြပြန်၏။
သော်တာမှာ ဦးလှမြိုင်၏ကောင်းမှုကြောင့် ရေမြင့်လို့ကြာတင့်ခဲ့ရသည်။ ဒါပေမဲ့ နှလုံးသားကို ညာနေခဲ့ပြီး စည်းစိမ်ချမ်းသာကို မက်မောနေခဲ့သော သော်တာ့ဘ၀ထဲသို့ လူတစ်ယောက်ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ ဆေးကျောင်းသား၊ သူဌေးသား၊ လူချောလို့ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေနဲ့ မိုးမြင့်။ နယ်ပယ်အသီးသီးက အလှဘုရင်မတွေ၊ အပျိုချောလေးတွေ တိတ်တခိုးစွဲလမ်းနှစ်သက်ကြရသည့် မိုးမြင့်က သော်တာ့ကို မျက်စိကျကာ အနားသို့ ချဉ်းကပ်လာခဲ့သည်။ သော်တာမှာ အဖေအရွယ်၊ ဦးလေးအရွယ် သက်ကြားအိုကြီးကိုလင်လုပ်နေရသည့် အခြေအနေတွင် ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်လေးက ခူးခွင့်ပေးနေတော့ ရင်ခုန်သံတွေမြန်ဆန်ခဲ့ရသည်။ နှလုံးသားက လှုပ်ရှားခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံးတော့ မိုးမြင့်လိုသက်တူရွယ်တူ နုပျိုချောမောပြီး ချမ်းသာကြွယ်ဝကာဆရာဝန်ဖြစ်မည့်သူကို ရင်ခုန်လှုပ်ရှားချစ်စိတ်ဖြင့်တစ်ဖက် ၊ ဘ၀အတွက် အာမခံချက်တွေအပြည့်အဝပေးနိုင်သည့် အခြေအနေရှိနေသည်ကတစ်ဖက်၊ နှစ်ဖက်စလုံးက သူမအတွက် အဆင်ပြေနေခြင်းကြောင့် မိုးမြင့်ကို ချစ်သူအဖြစ် လက်ခံလိုက်ပါတော့သည်။ မိုးမြင့်ကလည်း သော်တာ့ကို အလှဘုရင်မလေး မြန်မာဆန်ဆန်လှသူလေးမို့ အသဲစွဲအောင်ချစ်မိခဲ့သည်။ သော်တာ့ကို တစ်ဘ၀လုံးစာအတွက် ချစ်သည်ဟူ၍ပင်ကြွေးကြော်နေခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့ မိုးမြင့်ရဲ့ အိပ်မက်တွေ ပျက်စီးရဖို့ အကြောင်းဖန်လာခဲ့သည်။
”မိုးမြင့် …. မင်း သော်တာဆိုတဲ့ မိုးကုတ်ကကောင်မလေးကို တွဲနေတာ အတည်ဆို…” ”အေး..။ ဟုတ်တယ် ဇော်ကြီးရ …. မင်းဘယ်ကကြားလာရတာတုန်း” မိုးမြင့် သူငယ်ချင်း ဇော်ကြီးက မိုးကုတ်သား။ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေမို့ မိုးမြင့်ကိစ္စကြားတာနဲ့ ဇော်ကြီးပေါက်ချလာခြင်းဖြစ်သည်။ ”ငါမင်းကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောမယ် မိုးမြင့်… အဲဒီ စော်ကို မင်းဖြုတ်ရုံဖြုတ်ပြီးခေါက်ထားမယ်ဆိုရင် ငါဒီအထိလိုက်မလာဘူး။ အခုမင်းက အတည်ကြံနေတယ်ဆိုလို့ ငါ လိုက်လာရတာ။” ”ဟာ… ငါ သော်တာ့ကိုတကယ်ချစ်တာ ဇော်ကြီးရ ဘာဖြစ်လို့လဲ။” ”အေး… အဲဒီသော်တာဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက တို့မြို့က ကျောက်တွင်းသူဌေး ဦးလှမြိုင်ရဲ့နောက်မိန်းမတဲ့။” ”ဘာ…” မိုးမြင့် ဆွံ့အသွားသည်။ဒီစကားကို လာပြောတဲ့သူက သာမာန်ရင်းနှီးတဲ့လူဆို မိုးမြင့်လှောင်ပစ်လိုက်မှာ အသေအချာ။ သော်တာ့ကိုလိုက်မရလို့ မလိုမုန်းထားပြီး အပုပ်ချပြောနေသည်ဟုသတ်မှတ်လိုက်မိမှာပဲဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့ အခုက ငယ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နေသည့်အပြင်၊ မိုးကုတ်သားစစ်စစ်။ သော်တာနေထိုင်သည့်နေရာက ငယ်သူငယ်ချင်းက အတိအကျပြောနေခြင်းကြောင့် မိုးမြင့်မယုံလို့မရတော့။ မိုးမြင့်စိတ်တွေပေါက်ကွဲလာရပြီဖြစ်သည်။ သော်တာ့ကို သူချစ်သလောက် သော်တာကလည်းပြန်ချစ်ခဲ့သည်ဟု ထင်မိခဲ့တဲ့စိတ်တွေက သော်တာ့အပေါ် အမြင်စောင်းခဲ့ရလေပြီ။
အသက်ကြီးကြီးလင်ကိုယူထားပြီး လင်ငယ်နေချင်သည့်ကောင်မဟု သတ်မှတ်လိုက်မိတော့သည်။ သော်တာ့ကို သူ့ဘက်မှ အချစ်စစ်အချစ်မှန်နဲ့ ချစ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ယခင်ကြိုက်ခဲ့ဖူးသည့် မိန်းကလေးများလို အသွေးအသားကိုဝါးမျိုလိုသည့်စိတ်ကိုပင် ထိန်းချုပ်ထားခဲ့သည်။ သော်တာနဲ့ အတူနေခွင့်ရတာတောင် သူ့ဘက်ကစည်းစောင့်ပေးခဲ့သည်။ အခုတော့….။ ”တောက် … တွေ့ကြသေးတာပေါ့ သော်တာရယ်…။” မိုးမြင့်အကြီးအကျယ်ကြုံးဝါးပြီး သော်တာနေထိုင်ရာ အဆောင်သို့ထွက်လာခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့ သော်တာကရှိမနေခဲ့ပေ။ အဆောင်နေမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို မေးကြည့်လိုက်မိမှပင် မိုးမြင့်စိတ်ကို ပိုမိုထိခိုက်စေသော သတင်းစကားတစ်ခုကို ကြားခဲ့ရပြန်သည်။ ထိုစကားကမိုးမြင့်စိတ်ကို အရမ်းပေါက်ကွဲစေပြန်သည်။ ”မိုးကုတ်က သူ့ဦးလေးလာလို့ မြို့ထဲကတိုက်ခန်းမှာ လိုက်အိပ်တယ်။ ကျွန်မတို့သိသလောက်တော့ သော်တာနဲ့ အဲ့ဒီလူကြီးက ဦးလေးနဲ့ တူမ မဟုတ်ဘူး။” နောက် နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကြာတော့ သော်တာ အဆောင်ပြန်ရောက်လာပြီဟု သတင်းကြားတာနဲ့ သော်တာ့ဆီကို မိုးမြင့်ထွက်လာခဲ့သည်။ ”ဟယ်… ကို… ဒီအချိန်ကြီး မလာစဖူးပါလား..။” ”သော်တာအားရင် ကို နဲ့ ခဏလိုက်ခဲ့ပါလား။” ”ဟုတ်ကဲ့ ကို” သော်တာ့မှာတော့ မိုးမြင့်ဘာဖြစ်နေသည်ကိုမသိ။ သူမ ချစ်ရသူကလာခေါ်တော့ ကောက်ခါငင်ခါပင်လိုက်ပါလာခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောရက်က ဦးလှမြိုင်ရောက်လာခဲ့သဖြင့် မြို့ထဲတိုက်ခန်းတွင် အတူလိုက်ပါအိပ်စက်ခဲ့ရသည့် အချိန်များ၌ သော်တာမှာ မိုးမြင့်ကိုပင် သတိရနေခဲ့သည်။
ယခင်က ဦးလှမြိုင်၏ အနမ်း၊ အယုအယများအပေါ် သာယာမိန်းမူးခဲ့သော်လည်း မိုးမြင့်နှင့် ချစ်သူဖြစ်ခဲ့သည့် အချိန်နောက်ပိုင်းတွင် ဦးလှမြိုင်နှင့်အတူနေရသည်ကို ငရဲကျနေသလိုခံစားနေခဲ့ရသည်။မိုးမြင့်နှင့် စည်းမကျော်ခဲ့ဖူးသော်လည်း မိုးမြင့်ကိုချစ်သည့် စိတ်ကြောင့် အခုလိုဖြစ်နေခဲ့ရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ မိုးမြင့်က ယခင်ကောင်မလေးတွေကို ခေါ်လာနေကျတိုက်ခန်းသို့ သော်တာ့ကို ခေါ်ဆောင်လာသည်။ မိုးမြင့်ပုံစံက အေးတိအေးစက်နိုင်လွန်းလှသည်။ သော်တာ့ကို ယခင်ကလိုဧည့်ခန်း၌ပင်စကားမပြောတော့ဘဲ အိပ်ခန်းထဲသို့ တန်းခေါ်လာခဲ့သည်။ ”ကို … ဘာဖြစ်နေတာလဲ။ ဒီနေ့ သော်တာ့ကို ဆက်ဆံတာတစ်မျိုးကြီးပဲ။” ”ကို … မင်းနဲ့ အတူနေချင်တယ် သော်တာ… ကိုယ့်ကို ခွင့်ပြုမလား။” ”အို… ကိုကလည်း။” သော်တာရှက်သွေးဖြာသွားရသည်။ သူမဘက်မှ လိုက်လျောခဲ့တာတောင်မှ စည်းစောင့်ခဲ့သည့် ချစ်သူက ယခုကောက်ကာငင်ကာ တောင်းဆိုလာတော့ မငြင်းရက်ပဲ ခေါင်းလေးအသာငုံ့ကာ ငြိမ်ပြီးရပ်နေလိုက်မိသည်။ သူမဘ၀မှာ ဘယ်ယောက်ျားလေးအပေါ်မှ မခံစားဖူးခဲ့သည့် ရင်ခုန်မှုဖြင့် မိုးမြင့်ကိုချစ်ရသည်မို့ မိုးမြင့်တောင်းဆိုလာလျှင် သူမဘက်မှ အရာရာပေးဆပ်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေခဲ့သည်။ မိုးမြင့်က သော်တာ့ရှေ့တည့်တည့်တွင်ရပ်ကာ သူ၏ဘောင်းဘီကိုချွတ်ချပစ်လိုက်သည်။ ခေါင်းငုံ့ကာရပ်နေသော သော်တာမှာ ရှေ့မှလှုပ်ရှားမှုကြောင့် ခေါင်းကိုအသာအယာမော့အကြည့်တွင် မျက်လုံးလေးဝိုင်းသွားရသည်။
ထိုမျှမကသေး သော်တာတစ်ယောက်အာခေါင်တွေပင်ခြောက်လို့သွားရတော့သည်။ သူမမျက်စိရှေ့၌ မိုးမြင့်က အတန်ကြီးတရမ်းရမ်းနဲ့ အသင့်ဖြစ်နေပြီကိုး။ အောက်ပိုင်းဗလာကျင်းနှင့်ရပ်နေသော မိုးမြင့် ပေါင်ကြားထဲမှ အတန်ကြီးက သော်တာ့ကို တန်းမတ်စွာချိန်ရွယ်ထားသကဲ့သို့ တောင်မတ်စွာရှိနေ၏။ ”မင်း အ၀တ်တွေကို ချွတ်လိုက်လေ သော်တာ” မိုးမြင့်က သော်တာ့ကို အမိန့်သံဆန်ဆန် လေသံဖြင့်စေခိုင်းလိုက်သည်။ သော်တာက မိုးမြင့်စကားကို တသွေမတိမ်းလိုက်နာရှာသည်။ သူမကိုယ်ပေါ်မှ အ၀တ်အစားများကို တစ်လွှာချင်းချွတ်ချပစ်လိုက်သည်။ သော်တာ့ရဲ့ ဖြူဖွေးနူးညံ့ပြီး တွဲမကျသေးတဲ့ရင်သားထွားထွားကပေါ်ထွက်လာသည်။ ရင်သားထွားထွားအောက်က အဆီပိုမရှိပဲ ချပ်ရပ်နေသော ဗိုက်သားလေး၊ အဲဒီအောက်မှာတော့ အမွှေးအမြင်ပြောင်စင်အောင်ရိတ်ထားတဲ့ အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးက မြင်ရသူ မိုးမြင့်အဖို့ ရမက်သွေးတို့ ဆူဝေဖွယ်ရာအတိပင်။ သူမရင်ထဲတွင် စွဲလန်းချစ်ခင်ရသည့် မိုးမြင့်ကို ချစ်သည့်စိတ်ကြောင့် အနွမ်းပန်းဖြစ်နေရသည့် သူမမှ မိုးမြင့်အလိုကျ အစွမ်းကုန် လိုက်လျောဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားသည်။ထို့ကြောင့် သော်တာဆိုတဲ့ မိန်းမချောလေးခမျာ မိုးမြင့်ခိုင်းတဲ့အတိုင်း မကန့်ကွက်ပဲ မိုးမြင့်တောင်းဆိုသမျှ လိုက်လုပ်ပေးနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
မိုးမြင့်တစ်ယောက် လီးအတောင်သားနှင့် ကုတင်စောင်းမှာ ခြေချထိုင်လိုက်ပြီး ၀တ်လစ်စလစ်ကလေးဖြင့် ထိရက်ကိုင်ရက်စရာမရှိပဲ လှလွန်းနေသော သော်တာ့အလှကို ၀မ်းနည်း ကြေကွဲရိပ်သန်းသောမျက်ဝန်းအစုံဖြင့် ခပ်ဆွေးဆွေးလေးတစ်ချက်စိုက်ကြည့်လိုက်မိ၏။ ဒါပေမဲ့ ချက်ချင်းပင် မိုးမြင့်ရဲ့ မျက်လုံးများက ဒေါသစွက်သော အကြည့်များအဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းလို့သွားတော့သည်။ မိုးမြင့်ရင်ထဲမှာ သော်တာရဲ့ သစ္စာဖောက်ဖျက်လိမ်ညာလှည့်စားထားမှုများကို ပြန်လည်တွေးတောမိပြီး စိတ်တွေခက်ထန်သွားရခြင်းဖြစ်သည်။ ”ကိုယ့်ကို ချစ်သေးလား သော်တာ” မိုးမြင့်က သူ့ရှေ့မှာ ရှက်ရွံ့ဟန်လေးဖြင့် ရပ်နေသော သော်တာ့ကို စူးစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီး လေသံမှန်မှန်ဖြင့်ပင်မေးလိုက်သည်။ ”ကို့ကိုသော့်တာအရမ်းချစ်ပါတယ် ကိုရယ်။ ကို့ကိုချစ်လွန်းလို့ ကို့ဆန္ဒတွေဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ သော်တာအခုလိုလိုက်လာခဲ့ရတာပါ။ ကို သော်တာ့ကို အထင်မသေးပါနဲ့နော်….။” ယောက်ျားတွေကို အမြဲလှည့်ပတ်လိမ်ညာမာယာများလေ့ရှိသည့် သော်တာက သူမ၀သီအတိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိက္ခာဆည်သည့်အနေဖြင့် ပြောလိုက်သေး၏။
ထိုစကားသံတွေက မိုးမြင့်၏ရင်ဘတ်ကို ပိုမိုထိခိုက်နာကျင်စေမှန်း သော်တာမသိခဲ့ပေ။ ဒါကို ကိုယ့်လီးကို လာစုပ်ပေးကွာ။ သော်တာ လီးစုပ်ပေးတာကို ကိုယ်အရမ်းခံစားကြည့်ချင်တယ်။ မိုးမြင့်က သော်တာ့အကျင့်စရိုက်ကို အထင်သေးစွာဖြင့် အပျော်မယ်တစ်ယောက်ကိုဆက်ဆံသလို ခပ်ရင့်ရင့်ပင်စေခိုင်းလိုက်၏။ မိုးမြင့်စကားကြောင့် သော်တာ့ကိုယ်လေး တွန့်ကနဲပင်ဖြစ်သွားသည်။ သူမနှင့် ပတ်သက်ဖူးခဲ့သည့် ဘယ်ယောက်ျားကိုမှ သော်တာ ပုလွေမပေးဖူးခဲ့ပါ။ ယုတ်စွအဆုံးသူမရဲ့ကျေးဇူးရှင်လို့တောင် ပြောလို့ရသည့် ဦးလှမြိုင်ကိုတောင် သော်တာစုပ်ပေးခဲ့သည်မဟုတ်ပေ။ ဒါပေမဲ့ မိုးမြင့်က သူမလက်ထပ်မည့် ယောက်ျား၊ သူမချစ်ရသည့် ချစ်သူဟူသောအတွေးဖြင့် သော်တာ့စိတ်ထဲမာန်တင်းကာ ချစ်သူအလိုကျ လိင်တန်ကိုငုံစုပ်ပေးဖို့ ကုတင်စောင်းတွင်ထိုင်နေသော မိုးမြင့်ပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲသို့ ဒူးလေးထောက်ကာ ထိုင်လိုက်တော့သည်။ မိုးမြင့်၏ တောင်မတ်နေသော လိင်တန်ကြီးကို သော်တာ လက်ဖဝါးနုနုလေးဖြင့် ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ကာ တင်းပြောင်ဖူးထွက်နေသည့် ထိပ်ဖူးကို သူမနှုတ်ခမ်းပါးလေးများဖြင့် စတင်တို့ထိကာ စုပ်ငုံလိုက်တော့သည်။